Kodzero-dzevanhu, 27 Gunyana 2017
Chitatu 27 Gunyana 2017
Sachigaro weboka rerunyararo iri, VaWilfred Marimo, vati sevarwi verusununguko vanokumbira kuregererwa neruzhinji pane zvavanopomerwa uye zvakaitwa nevamwe vavo vaimbunyikidza veruzhinji.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zviri Kunze Zvonetsekana neMatambudziko eKumusha
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvatotanga kutsvaga nzira dzekutumira nadzo zvekudya zvinonzi zvave kunetsa kuwana munyika nekuda kwekushaikwa kana kukwira kwemitengo.
ZCTU Yokurudzira VaMugabe Kubva paChigaro
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, rinoti hurumende yaVaMugabe yatadza kutungamirira nyika izvo zviri kupa kuti hupfumi hwenyika huende kumazivandadzoka.
Pastor Mawarire Vanoburitswa Muhusungwa
Dare ramejasitiriti remuHarare raramba kuti Pastor Evan Mawarire vamiswe pamberi pedare vachipomerwa mhosva yavakasungirwa nemusi weSvondo.
Nyanzvi Dzopesana Maonero paNyaya yeKudhura kweZvinhu
Vakuru vemabhizimisi nenyanzvi munyaya dzezvehupfumi havasi kuwirirana panyaya yekuti dambudziko rekushomeka kwezvinhu muzvitoro uye kudhura kwazvo riri kukinzerwa nei.
Vamwe Vonyunyuta neKushaikwa kweDzimwe Nzvimbo Mumichina yeZEC
Seneta Marava vanoti neMuvhuro ivo navadzimai vavo vakaenda pamahofisi eZEC ari paZaka kunonyoresa kuvhota asi vakashamisika vachiudzwa kuti nzvimbo yavo yekuvhotera yeNhema Primary School yakanga isiri kuwanikwa mumichina yeZEC.